Hiran State - News: Jaaliyada Toronto oo si aan caadi aheyn u soo dhaweeyey Musharaxa Prof Warfaa.
Jaaliyada Toronto oo si aan caadi aheyn u soo dhaweeyey Musharaxa Prof Warfaa.
Toronto:- Prof Ahmed Abukar Mahad waa aqoon yahan Somaliyeed kana mid ahaa macaliimiintii ugu horeysay ee wax ku bara jaamacadii umada Soamiyeed ardey uu ka mid ahaa Professor Warfaa isagoo ku dheeraaday mudadii uu qudbeeynayey taariikhda ardeygiisii hore oo hada doonayo inuu hogaanka u qabto umada Somaliyeed waa hadii ale waafajiyo hamigiisa.
Mar uu ka hadlayey dhibaatada shacabka Somaliyeed ka soo gaartay dagaaladan sokeeye ayuu tusaale u oo qaatay gabar Somaliyeed amaba hooyo Somaliyeed oo 4 caruur ah ku heysata dalkaasi Yemen oo iyadu caruurta midka ugu weyn uu yahay 6 jir iyo waxii ka yar gebedhuna ay u shaqeyso saacado aad u badan reer u dhashay dalkaasi Yemen iyadoo mar BBCda laga wareystay la weydiiyey nolosheeda iyo sida ay u maareyo kedibna waxey ku jawaabtay. noloshu aad ayey u adag tahay xiliga aan shaqada jiro caruurta dhan waxaan ku xiraa mid kasta sil silad si aysan int aan maqanahay u bixin ileen rajada kaliya oo ay qabaan waa iyadee. kedibna waxey tiri markaan soo laabto waxaan imaadaa iyagoo cunay maba cunaya kaadidii y dhigeen amaba saxaradii.
Dadcan mudadii uu ka sheegeynayey Professor Ahmed Abukar Mahad wuu ilmeynayey waliba waxuu dalka Somaliya ka soo noqday mudane baarlamaan ilaa uu inadhiisa ku arkey hanaanka dowladnimo wanaagisa iyo heerka ay maanta shacabkeenu marayaan.
Dadkii intooda aduunyadan mudada soo joogay oo waaya aragnimada u leh sidii soo kale waxaa heysta waxa ay reer galbeedku u yaqaanaan No were to go. marka ay xaaladu heerkaan oo kale gaarto waxey abwaaniinta Somaliyeed dhihi jireen (Anoo suuf iyo soodir maalaan seexan waayaye Sac nin heystiyo Sagaareystiyo sabool ari luhu see u nool yahay). hadaba dadkii qurbaha ku noolaa ee wadanmada nabada ah ka jirtay iyaga xitaa wey saameysay nabadba ha iska heystaane qaarkood caruurii ayaa xabsiyo kaka jiro, ubadkii dhaqn dooris aya ku dhacay, dadkii heerka uu Prof Ahmed Abukar ka hadlayo ayey marayaan.
Wadanku colaadba haka jirtee shacabkii waxaa maalin iyo habeen u dheer qilaafka hogaanka sare goorta uu dhamaanayo lama garanayo. ugu danbeyn dadkii oo qushucsan waxaa goobtii la wareegay dumarkii oo waxaa Professor Ahmed ilmadiika tiray dumar aan ka xasuusto Fnaanada weyn e qaranka Nagruuxo iyo suxufiyada qaranka Somaliyeed Luul Hasan Cali iyo gabar iyadu is celin weysay oo dadweynaha dhexdooda ka soo gacday oo calankii Somaliyeed dusha ka saartay.
Intaasi kedib howshii halkeedii ayey ka sii socotay waxaana halkaasi Baraanbur ka qaaday fanaanada weyn ee Somaliyeed Nagruuma iyo geber iyadu ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo baraanbur dadkii shacuurtooda kiciyey iyadu halkaasi ka qaaday bal qeybteena danbe ayaanu ku soo qaaadan doonaa labada Buraan bur.
La soco wararkeena danbe iyo waliba sawiro
· admin on May 22 2011 10:48:03 · 0 Comments · 2769 Reads ·
14,667,526 unique visits